उत्तर कोरियाका नेता किम जोन उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक, हस्पिटलमा भर्ना ! – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /International/उत्तर कोरियाका नेता किम जोन उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक, हस्पिटलमा भर्ना !
सिउल – दक्षिण कोरियाले छिमेकी उत्तर कोरियाका नेता किम जोन उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएपछि नजिकबाट घटना नियालिरहेको दाबी अमेरिकी समाचार संस्था सिएनएनले गरेको छ। अचानक गर्नु परेको शल्यक्रियाका कारण उनको स्वास्थ्य बिग्रिएको दाबी दक्षिण कोरियाका अधिकारी र अमेरिकी गुप्तचर अधिकारीलाई उदृत गर्दै सिएनएनले गरेको छ।
दुई कोरियाको मामिला हेर्ने युनिफिकेसन मन्त्रालयले सिएनएनले प्रकाशित गरेको समाचारबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। केही सन्चार माध्यमले उत्तर कोरियाको राजधानी प्योङयाङमा किम जोन उनको मुटुको शल्यक्रिया भएको र उनको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको उल्लेख गरेका छन्।
उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन १५ अप्रिलमा आफ्ना हजुरबुवा किम इल सुङको जन्मोत्सव कार्यक्रममा सहभागी नभएपछि शंका उब्जियो । उत्तर कोरियामा कम्युनिस्ट शासनको संस्थापक उनका हजुरबुवाको जन्मोत्सव भव्य रुपमा मनाउने गरिएको छ । तर, यसपटक उनी सहभागी भएनन् । त्यसको चार दिन अघि ११ अप्रिलमा उनी एउटा बैठकमा सहभागी भएको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो । उनी महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी नभएपछि चासो बढ्यो ।
प्रायः सार्वजनिक समारोहमा कमै देखिने किम महत्वपूर्ण कार्यक्रममा नदेखिएपछि खुफिया एजेन्सीहरुले त्यसबारे खोजी गरे । अहिले उनको जीवननै खतरामा रहेको सुचनाहरु बाहिर आएका छन् । उनको शल्यक्रिया भएको र जटिल स्वास्थ्य अवस्था भएकोबारे सँसारका शक्तिशाली देशका खुफिया एजेन्सीले खोजी गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये अमेरिकी खुफिया एजेन्सी पनि पर्दछ । सीएनएनका अनुसार अमेरिकी खुफियाहरुले उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ्ग उनको अवस्थाबारे गहिरोसँग निगरानी गरिरहेका छन् ।
उत्तर कोरियामा मिडियामाथि सरकारको नियन्त्रण रहेका कारण त्यहाँका गतिविधिहरु फिल्टर भएर मात्र बाहिर आउँछन्। दक्षिण कोरियाका गुप्तचर निकायको हवला दिँदै मिडियाले समाचार लेख्ने गरेका छन्।
किम सार्वजनिकरुपमा नदेखिने वित्तिकै उनको स्वास्थ्य बिग्रिएको भनेर समाचार प्रकाशित हुने गरेको छ। यसअघि सन् २०१४ मा किम जोन उन ६ साता बाहिर नदेखिँदा पनि उनको स्वास्थ्य विग्रिएको भनेर समाचार बाहिर आएको थियो। त्यतिबेला दक्षिण कोरियाका गुप्तचर निकायले किमको गोलिगाँठामा समस्या भएको दाबी गरेका थिए। बुबाको निधन भएपछि किम जङले सन् २०११ यता उत्तर कोरियाको सत्ता चलाइरहेका छन्। उनी उत्तर कोरियाको सत्ता सम्हाल्ने परिवारका तेस्रो पुस्ता हुन्।
किमको अत्यन्त खराब स्थितिका कारण उनको स्थानमा कसले उत्तर कोरियाको बागडोर सम्हाल्छ भन्न अनुमानले तिब्रता लिइरहेको छ । यसमा सबैभन्दा चर्चामा आएको नाम उनकी बहिनी किम यो जोंग हुन् । उत्तर कोरियाली नेताको खराब स्थितिको संकेत त्यति बेला आएका थियो जब केही दिन अगाडी किम जोंग उनकी शक्तिशाली बहिनी किम यो जाेंगलाई निर्णय लिन सक्ने प्रमुख निकायमा पुन नियुक्त गरिएको थियो । त्यसपछि विश्वबाट एक्लिएको यस राष्ट्रमा किम यो जोंगको उचाइ बढेको त्यहाँको सरकारी सन्चार माध्यमले आइतबार दिएको थियो ।
किमको बारेमा जानकारी पाउन सजिलो भने छैन । कम्युनिस्ट शासकसँगको पहुँच नै कठिन छ । उनी कडा सुरक्षामा रहने गर्छन् । उत्तर कोरिया यसै पनि गोपनियता राख्न अब्बल छ । किम कमैको पहुँचमा पर्छन् । उनको सुरक्षाकर्मी आफैमा विशेष तरिकाले छानिएका हुन्छन् ।